Shiinaha Midabka Acrylic Muraayada iyo alaableyda | Donghua
Ka faa'iideysiga miisaanka, saameynta, burburka u adkaysta, ka qaalisan kana adkaysi badan muraayadaha, xaashiyaha muraayadda acrylic-ka ah waxaa loo isticmaali karaa bedel ahaan muraayadaha dhaqameed dhaqameed ee dalabyo iyo warshado badan. Muraayadda loo yaqaan 'Dhua acrylic mirror' ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo midabbo muuqda leh.
• Lagu heli karaa 48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830mm / 1220x2440mm) xaashiyo
• Waxaa laga heli karaa .039 0 ilaa .236 ″ (1.0 - 6.0 mm) dhumucda
• Waxaa laga heli karaa kuul, dahab, dahab dahab, naxaas, buluug, buluug madow, cagaar, oranji, casaan, qalin, jaalle iyo midabbo badan oo caado ah.
• Iswaafajin-ilaa-cabbir, ikhtiyaarro dhumuc leh
• Filin 3-mil ah oo laysarka gooyay ayaa la keenay
• ikhtiyaarka daahan ee xoqida u adkeysanaya ee AR ayaa la heli karaa
Muraayada midabka leh ee midabka leh Waraaqaha, Midab Muraayadaha loo yaqaan Acrylic Plexiglass Xaashida
Ka faa'iideysiga miisaanka, saameynta, u adkaysiga burburka, ka qaalisan kana adkaysi badan dhalooyinka, kuwayaga sheet muraayad looxas waxaa loo isticmaali karaa badal ahaan muraayadaha dhaqamada dhaqamada iyo warshadaha badan. Sida dhammaan acrylics, oursheet muraayad looxas si fudud ayaa loo goyn karaa, loo qaadi karaa, loo samayn karaa iyada oo la farsameeyay iyo leysarka oo la dhejiyay Xaashidayada muraayaduhu waxay ku yimaadaan midabbo kala duwan, dhumuc iyo cabbirro kala duwan, waxaanan bixinnaa ikhtiyaarrada muraayadaha ee la jarjaray.
Magaca badeecada Xaashida Midabka Muraayada loo yaqaan 'Plexiglass Sheet', Waraaqaha Muraayadda Midabka leh ee Midabka leh
Waxyaabaha Waxyaabaha loo yaqaan 'Virgin PMMA'
Dhammeystirka dusha sare Dhalaalaya
Midab Amber, dahab, dahab kor u kacay, naxaas, buluug, buluug madow, cagaar, oranji, casaan, qalin, jaalle iyo midabbo badan oo caado ah
Cabir 1220 * 2440 mm, 1220 * 1830 mm, caado-jaris u qaabeysan
Dhumucdiisuna 1-6 mm
Cufnaanta 1.2 g / cm3
Maska duugista Filim ama warqad qoraal ah
Codsiga Qurxinta, xayeysiinta, bandhigga, farshaxanada, qurxinta, amniga, iwm.
MOQ 50 go'yaal
Waqti Sample ah 1-3 maalmood
Waqtiga dirida 10-20 maalmood ka dib helitaanka deebaajiga
Sababtoo ah soosaarida iyo jarista dulqaadka, dhererka xajmiga iyo balaca way ku kala duwanaan karaan +/- 1/4 ″. Dulqaadka dhumucdiisuna waa +/- 10% go'yaal akrilik ah wayna ku kala duwanaan karaan dhammaan xaashida. Caadi ahaan waxaan aragnaa kala duwanaansho ka yar 5%. Fadlan tixraac dhumucda xaashida magaca iyo dhabta ah ee hoose.
Fadlan nala soo xiriir haddii aad leedahay shuruudo dulqaad cabbir ka adag dulqaadkeena caadiga ah.
Xaashida 'Dhua Acrylic Mirror' ayaa lagu heli karaa midabbo kala duwan.
Kuweena muraayad looxago'yaal ku habboon codsiyada kala duwan. Waxaa jira adeegsiyo badan oo caam ah, oo kuwa ugu caansan ay yihiin Goobta iibka / Goobta iibsiga, soo bandhigida tafaariiqda, calaamadaha, amniga, qurxinta, badda, iyo mashaariicda baabuurta, iyo sidoo kale qalabka guryaha lagu qurxiyo iyo sameynta golaha wasiirada, kiisaska bandhigga, POP / tafaariiqda / keydinta qalabka, qurxinta iyo naqshadeynta gudaha iyo codsiyada mashaariicda DIY.
Muraayada Plexiglass waa xaashi "milicsi leh" Waxaa jira codsiyo badan halkamuraayad looxa(Plexiglass mirror) si aad u wanaagsan ayuu u shaqeeyaa. LAGUma jeedo in lagu beddelo milicsiga tayada muraayadda muraayadda. Taasi waxay tiri, waa inaad ka fiirsataa muraayadda loo yaqaan 'plexiglass mirror' ee codsiyada halkaasoo SAFETY ay tahay mid walaac weyn laga qabo maadaama muraayadda balaastiggu ay aad u adag tahay in la jebiyo - markay dhacdana, waxay u jajabtaa qaybo waaweyn oo gacmo furan lagu qaban karo.
In kasta oo milicsiga labada muraayadood ee 1/8 ″ ama 1/4 ″ ay u muuqato mid u fiican 1-2ft fogaan ahaan, 10-25ft ama ka badan, saamayn “guri madadaalo” ayaa dhacaysa sababta oo ah xaashidu waa rogrogmi kartaa (halka dhalada aad u adag tahay). Tayada milicsigu waa DHAMMAAN ku tiirsan tahay CARRANKA darbiga aad kortaan (iyo cabirka muraayada).
Xaashida loo yaqaan 'Dhua Acrylic Mirror Sheet' waxaa lagu sameeyaa xaashi acrylic ah oo la soo saaray. Cabudhinta waxaa lagu sameeyaa habka faakiyuumka lagu metelayo ee aluminium ahaan birta koowaad ee uumiga.
Waxaan nahay Soo saare Xirfad Leh
Dahaarka muraayadda looxa looxa ah
xaashiyaha muraayadda looxa dahabka
xaashida muraayadda isku dhejisan
muraayadda midabka warqadda looxa
muraayad dahab xaashi acrylic ah
kacay muraayad dahab acrylic
warqad muraayad acrylic acheslic is